Hehy mahatsikaiky ny sasany ... Ny sotro sy ny kofehy | Martech Zone
Avy amin'ny namana, Bob Carlson, ao amin'ny FahasalamanaX:
Lesona tsy manam-potoana momba ny fomba ahafahan'ny consultants manova zavatra ho an'ny fikambanana.
Tamin'ny herinandro lasa, nitondra namana vitsivitsy tany amin'ny trano fisakafoanana vaovao izahay, ary nahatsikaritra fa ilay mpandroso sakafo izay naka ny kaontinay dia nitondra sotro tao am-paosin'ny lobany. Toa hafahafa kely ilay izy.
Rehefa nitondra ny ranonay sy ny fitaovanay ilay busboy dia nahatsikaritra aho fa nisy sotro koa tao am-paosin'ny lobany. Avy eo nijery manodidina aho nahita fa ny mpiasa rehetra dia misy sotro ao am-paosiny.
Rehefa niverina nanompo ny lasihinay ilay mpandroso sakafo dia nanontany aho hoe: "Fa maninona no sotro?"
“Eny,” hoy ny fanazavany, “ny tompon'ilay trano fisakafoanana dia nanakarama mpanolotsaina iray hanavao ny fomba fanaovanay rehetra. Rehefa vita ny fanadihadiana nandritra ny volana maromaro dia nanatsoaka hevitra izy ireo fa ny sotro no fitaovana nilatsaka matetika indrindra. Izy io dia maneho ny haavo mitete manodidina ny 3 sotro isaky ny latabatra isan'ora. Raha miomana tsara kokoa ny mpiasanay dia afaka mampihena ny isan'ny dia hiverina any an-dakozia isika ary hitahiry ora 15 isaky ny adiny. ”
Araka ny vintana, nilatsaka ny sotroiko ary azony nosoloina tamin'ny tahiriny. “Mahazo sotro iray hafa aho amin'ny manaraka mankany an-dakozia fa tsy hanao dia lavitra mba hahazoana izany dieny izao.” Nahagaga ahy izany.
Tsikaritro ihany koa fa misy tadiny mihantona avy eo amin'ny vatan'ny mpandroso sakafo. Nijery ny manodidina aho, dia hitako fa ny mpanafika rehetra dia nitady tadiny mitovy amin'ny lalitra. Ka talohan'ny nandehanany dia nanontany ilay mpandroso sakafo aho hoe: “Azafady, azafady mba lazao ahy ve hoe maninona ianao no manana an'io tady io eo?”
“Marina tokoa!” Dia nampidina ny feony izy. “Tsy ny rehetra no mandinika. Io consultant noteneniko io koa dia nahita fa afaka manangona fotoana ao amin'ny trano fidiovana isika. Amin'ny fatorana an'ity tendrony ity amin'ny tendrony hainao dia afaka mamoaka azy tsy hikasika azy isika ary hanafoana ny filàna hanasa tanana, hanafohezana ny fotoana laniana ao amin'ny trano fidiovana 76.39 isan-jato.
"Rehefa avy mamoaka azy ianao, ahoana no hamerenanao azy?"
“Eny,” hoy izy nibitsibitsika, “Tsy fantatro ny momba ny hafa… fa ny sotro no ampiasaiko.”
Tags: mampivelatra infografikaGoogle Analyticspaikady infografikainneractivesary infactative anatinyKeywordRadio Marketing Technologyinfografika dokambarotra findaydokam-barotra findayinfographic amin'ny dokambarotra findayfinday infographicfikarohana biolojikany fiainana manokanalalànatsiambaratelo media sosialylalàna momba ny media sosialy
Dec 21, 2007 amin'ny 3: 29 AM
Haha. Nahavariana ahy ny fomba nampiasan'ilay trano fisakafoanana tamin'ny sotro mandra-pamakiako ny fehezanteny farany. Hihomehy tsara!